AKWỤKWỌ GENERIC (S): Nchịkwa, Nkọwapụta, Nchịkwa ntụ ntụ, Matrixpowder
Enweghị ezi gosipụtara omume na-adịghị njọ n'oge ọchịchị ALT. Ọ bụghị ụmụ anụmanụ niile gosipụtara omume ọjọọ mgbe akpọrọla ALT. Mgbe e jikọtara data sitere na ọmụmụ abụọ ahụ, 2 nke 16 (12.5%) nke ìgwè II na 6 nke 16 (37.5%) nke ìgwè III nke pigs anaghị egosipụta igosi ala. Na-esote nzọụkwụ ALT, ụmụ nwanyị dị iche iche nke II na nke III laghachiri n'ọgba aghara na 5.6 ± 0.3 na 5.8 ± 0.3 ụbọchị, n'otu (p> 0.05). A mụbara ọnụọgụ lutea (p <0.05) site na nyocha ALT nanị (11.4 ± 1.8) ma jiri ya tụnyere njikwa (6.9 ± 1.3) ma mụbaa (p <0.01) n'ihu site n'iji gonadotropins na-emepụta ihe (22.6 ± 1.9). A na-esi na 14 nke ụmụ nwanyị 22 nweta nhụjuanya na blastocysts nkịtị. Otú ọ dị, a hụrụ cysts na endometrium nke 5 nke 9 na 9 nke 10 pigs na Group II na III, n'otu n'otu. Ogologo ọnọdụ a, akụkọ ọdịnala nke a na-akọwapụta dị ka hyperplasia endometrial hypermlasia (CEH), dịgasị iche n'etiti ụmụ nwanyị, ọnọdụ ya gosipụtara na ọ dị afọ. Nyocha nke na-esiteghị na SLA miniature ezi ìgwè ehi-ndị di na nwunye na-ekpughe na CEH enweghị ihe jikọrọ ya na ọgwụgwọ ALT orgonadotropin.
Ọmụmụ ihe a nyochare mmetụta nhụsianya na mmekorita nwoke na nwanyị na ime mkparịta ụka na nke seminal na-eto eto na-eto eto n'ihi nchịkọta kwa ụbọchị nke Altrenogest powdera maka izu asatọ. A na-enyocha ala ndị a mgbe oge mgbake gasịrị izu asatọ (ụbọchị 111). Na ugboro atọ n'ime ọmụmụ ihe (ụbọchị-9, 60 na 111), e debere ihe ndị ahụ gụnyere oke, mgbagwoju anya na akụkụ ahụ nke ụlọ ọrụ. Okpukpo a na-emega ahụ dị iche iche dị iche iche dị iche iche, ihe nchịkwa ahụ ma ọ bụ ihe nrịta nha n'oge ọmụmụ ihe ahụ. Otú ọ dị, ọnọdụ scrotal na-ebelata (P <.05) na-agwọ ọrịa na izu asatọ ma nọgide na-ala ala (P <.05) mgbe izu asatọ gasịrị site na Altrenogest raw powder (izu 16). Ụkpụrụ maka mgbagwoju anya scrotal dị iche iche (P <.05) n'etiti akara na usoro ọgwụgwọ n'otu izu 16. A na - achọpụta na mbelata nke mmepụta ihe a na - emepụta kwa ụbọchị (DSP) n'ime ụlọ ọrụ ahụ na izu asatọ (P <.01) na izu 16 (P <.05). Ọnụ ọgụgụ a na DSP e mere atụmatụ dịka enwere njikọ ya na mgbatị nke scrotal. Ọrịa Spermatozoal na-arịwanye elu n'ime usoro ọgwụgwọ ndị ahụ, na-enwe nsogbu ụbụrụ (P <.009) na ọdịdị ọdụ (P <.001) na-arịwanye elu n'etiti oge nchịkọta oge tupu oge ikpe na oge nchịkọta izu asatọ.
Egburu ụlọnga maka omume mmekọahụ na ịkpa ike site na iji ule a kọwaa njedebe ugboro atọ n'oge ọmụmụ (ụbọchị-12, 57 na 111). Elere omume site n'igosi ebe a na-ekpuchi ebe a na-ejide onwe ya na estrus maka oge nyocha nkeji atọ. Oge ole na ole na ogologo oge na-agbada (P <.05) n'etiti Altronogest ntụ na-eme ka ntụ ntụ na izu asatọ. Ogologo oge nkedo nke ntinye a na - eme ka ibelata (P <.08) na izu asatọ n'ime ugbo agha. E mekwara ka ogologo oge (P <.05) na ugboro (P <.005) belata na ìgwè ahụ a na-emeso na izu asatọ.
Altrenogest raw ntụ ntụ Ezi ntụziaka
1 nyochaa maka Okpokoro uhie
Altrenogest ntụ ntụ bụ amamihe